ကျွန်ုပ်မည်သို့စတင်ရမည် လူမှုမီဒီယာ? လူမှုရေးမီဒီယာများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောသောအခါဤမေးခွန်းသည်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရရှိနေသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ကုမ္ပဏီသည်လူမှုမီဒီယာတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။
သင်၏လူမှုကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ပါ - လူမှုမီဒီယာတစ်ခုချင်းစီတွင်ထူးခြားသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်ဖောက်သည်များကိုရှာဖွေပါ။ ငါကရိုးရိုးလေးရွေးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကိုလျစ်လျူရှုတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး။ သင်ပလက်ဖောင်းအားလုံးမှာပါ ၀ င်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခွင့်အရေးတွေတိုးလာတဲ့နေရာကိုအာရုံစိုက်ပြီးပစ်မှတ်ထားပါ။ ဒါကအက္ခရာစဉ်တစ်ခုစီရဲ့လူ ဦး ရေစာရင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖြည့်ပါ - ယေဘူယျပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊ နောက်ခံပျောက်ဆုံးမှုသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ရန်တွန့်ဆုတ်နေပါသည်။ သင်၏အချိန်ကိုတည်ဆောက်ပြီးထိုတွင်ရှိနေရန်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြသသောထူးခြားသော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုပေးပါ။
သင်၏အသံနှင့်အသံကိုရှာပါ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အွန်လိုင်းတွင်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မျှဝေခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်သည့်အခါသင်တသမတ်တည်းကျသောအသံကိုမြဲမြံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်အလုပ်များကျယ်။ ကျယ်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်မ ၀ င်စားပါနှင့်!
တစ် Cadence ဖွံ့ဖြိုး - သင်၏ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များသည်သင့်ထံမှမကြာမီနှင့်မကြာခဏမွမ်းမံမှုများကိုမျှော်လင့်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်လူမှုမီဒီယာဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ကစားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာများနှင့်သေးငယ်တဲ့ရှယ်ယာနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ... ရုံမှာအလုပ်လုပ်ဆက်လက်နှင့်အရှုံးမပေးပါနဲ့! အကယ်၍ သင်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ရပ်တန့်ပါကသင်ထပ်မံကျော်လွှားရမည့်သိသိသာသာကျဆင်းမှုကိုမကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု - ယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုကော်ပိုရေးရှင်းများတုန့်ပြန်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖိုရမ်ဖြစ်သောကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုအခြားသူများကပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြမည့်ပြသနာကိုဖြေရှင်းရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပြသရန်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။